Stats 3 mahavariana manohana ny fivarotana ara-tsosialy | Martech Zone
Stats 3 mahavariana manohana ny fivarotana ara-tsosialy
Alahady, Martsa 15, 2015 Sabotsy, Martsa 14, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo toetra mahazatra hitako hatrany amin'ireo olona fampandrosoana olona mahomby na mpiasa am-barotra dia ny fifamatoran'izy ireo tsara.
Ny namako akaiky Doug Theis of Innovative Integrations, an Orinasa misahana ny serivisy tantanina any Indianapolis dia iray amin'ireo olona ireo. Nanatrika ny sakafo maraina Indianapolis Business Journal izahay ary nivazivazy aho fa azo inoana fa fantatr'i Doug ny olon-drehetra tao amin'ilay efitrano. Raha ny marina dia nomen'ny mpiara-miasa Harry Howe tapakila izahay - izay natolotr'i Doug ahy hitarika ahy ao amin'ny fitomboana sy fahombiazana of DK New Media.
Tsy mahafantatra ny olon-drehetra fotsiny i Doug, fa mandany fotoana hifandraisana ary hanome lanja foana. Io sanda io dia nahatonga azy ho loharano tena sarobidy teo amin'ny tsenan'ny teknolojia Indianapolis. Ary mazava ho azy fa manamora kokoa ny asan'i Doug amin'ny fivarotana satria sady natoky izy no mifandray foana.
Raha ao an-tsaina izany dia tsy mahagaga raha misy koa ny antontan'isa izay manome porofo fa ny fananana haino aman-jery sosialy tsara sy fisian'ny tambajotra dia manakiana ihany koa:
78% ny mpivarotra mampiasa outselles media sosialy ny namany.
73% amin'ireo mpivarotra izay nampiasa ny fivarotana ara-tsosialy dia tsy nahomby ny namany.
60% fahazoana quota lehibe kokoa ho an'ny solontenan'ny varotra mampiasa fivarotana sosialy.
Ny fametrahana ny tenanao amin'ny haino aman-jery sosialy, ny fihainoana tsara ny fotoana ahafahana manompo ny fiarahamonina misy anao, ary ny fidirana amin'ny media sosialy Dingana tsotra 3 nofaritan'ny Salesforce amin'ny fivarotana ara-tsosialy mahomby. Ny fanomezana lanja, fa tsy ny fametrahana ny tenanao ho loharano mihitsy no manakiana ny fivarotana fahombiazana amin'ny Internet!
Ahoana no hanampian'ny marketing amin'ny fivarotana ara-tsosialy?
Ny ekipanao varotra dia ireo manam-pahaizana momba ny fifandraisana izay manampahaizana manokana amin'ny fitantanana tanjona ary manampy amin'ny fahazoana ny fanantenana hiampita ny tsipika fahatongavana. Nilaza izy ireo fa izy ireo koa no manam-pahaizana fa eto no ilain'ny olona andrasana isan'andro. Moa ve ny sampan-draharahan'ny varotrao manome ny atiny ilaina hanampiana azy ireo hanangana lanja sy hametraka ny tenany ho loharano? Fandinihana tranga, tantaran'ny mpampiasa, rindrambaiko fotsy, infografika… ireo loharanom-pahalalana rehetra ireo dia afaka manampy azy ireo hampody ny matihanina amin'ny varotrao amin'ny Internet sy hanome ny sandany ilainy.
Tags: salesforcesalesforce infographicfivarotana ara-tsosialy